Warbaahinta LifeStreet waxay sumcado ka dhigtaa kuwa caanka ah
Khamiis, May 31, 2012 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Marka laga hadlayo kubbadda indhaha iyo feejignaanta, ma jirto hal marin wax qaybsi oo la tartami kara ciyaaraha bulshada. Dadka adduunka oo dhami waxay ku qaataan qiyaastii 200 milyan oo daqiiqo maalintii ciyaar Shimbiraha cadhooday. Ciyaarta cusub ee Zynga, Cityville, ayaa soo jiidatay 100 million users bishii ugu horreysay oo keliya. Suuqyayaashu waxay isku dayi karaan inay xoog ku qaataan xoogaa goos goos ah iyagoo ku siibanaya qaar ka mid ah ciyaaraha aan caadiga ahayn oo ay ku soo bandhigayaan astaamahooda, laakiin fursadaha ayaa ah in ciyaaraha noocan oo kale ah ay had iyo jeer cirro yeeshaan marka la barbardhigo kuwa ugu iibka badan ee helay aqbalaad ballaadhan iyo caan.
Waa maxay habka ugu wanaagsan ee suuqleydu uga faa'iideysan karto xiisaha ciyaarta? Xayeysiintu had iyo jeer waa laga heli karaa barnaamijyada ciyaaraha, laakiin beegsashada xayeysiisyada khuseeya dadka isticmaala ee tallaabada qaada ayaa ah caqabadda. Tani waxay ahayd hadafka Lifestreet's Barxadda xayeysiinta ee Revjet… waxayna helayaan natiijooyin.
LifeStreet waxay ku siisaa xayeysiin gudaha-app ah iyadoo diirada la saarayo barnaamijyada Facebook, Apple (iOS) iyo Android. Barxadda tikniyoolajiyadda 'LifeStreet' ee 'RevJet' waxaa lagu dhisay server-ka shay ee adduunka ugu horreeya si kor loogu qaado dakhliga. Tiknoolajiyaddani waxay khuseysaa falcelin tijaabinta xawaaraha sare xayeysiisyada, bogagga degitaanka, go'aannada tahriibinta, algorithms kordhinta dakhliga ama shay kasta oo dakhli ku kasbado.
Barnaamijka 'LifeStreet's RevJet optimization platform' wuxuu ku dhisan yahay shayga ugu horreeya adduunka ee sheyga guud waana soosaarka $ 25 + milyan oo maalgashi horumarineed. RevJet waxay khuseysaa Imtixaanka Xawaaraha Sare ee Iterative ee darawal kasta oo dakhli dijitaal ah, oo ka bilaabma walxaha muuqaalka leh sida xayeysiinta iyo bogagga degista ilaa walxaha macquulka ah sida go'aamada tahriibinta iyo algorithms kordhinta dakhliga RevJet waxay soosaaraysaa heerarka lacag-soo-saaridda ee heer sare ah iyo macaamiisha cusub ee aan caadiga ahayn ee aadka u sarreeya ee xayeysiiyayaasha bulshada iyo moobiilka, daabacayaasha iyo barnaamijyada horumarineedba LifeStreet waxay gaaraan 350 milyan oo adeegsadayaasha bulshada iyo mobilada bil kasta waxayna kexeeyeen in ka badan 200 milyan oo app ah. Shirkadda waxaa loo magacaabay mid ka mid ah 500 ee shirkadaha gaarka loo leeyahay ee ugu kobaca badan Mareykanka ee Inc. Magazine waxayna xarunteedu tahay San Carlos, California oo leh xafiisyo ku yaal Moscow, Odessa, iyo Riga.
Iyada oo bil kasta la gaaro in ka badan 350 milyan oo isticmaaleyaasha bulshada iyo moobiilka, LifeStreet waxay macaamiisha u gudbisaa xayeysiistayaasha. Qiimaha waxqabadka khatarta yar ee salka ku haya halka xayeysiiyaha uu ku bixinayo natiijooyinka halkii uu riixi lahaa isla markaana uu ikhtiyaar u leeyahay inuu ka soo qaato metric ka doorbidaya Cost Per Install (CPI), Cost Per Acquisition (CPA), Cost Per Post Conversion Event (CPX) iyo wixii la mid ah (!), Suuqgeeyayaasha suuqyadu MA awoodo inay iska indhatiraan LifeStreet .. Waqtiga dhabta ah ee warbixinta la habeyn karo, maareeyayaasha xisaabta ee u heellan, iyo adeegyo kale oo qiimo leh ayaa lagu soo daray.
Maaddaama LifeStreet aysan wadin wax ololeyaal dhiirrigelin ah, waxaad heleysaa oo keliya macaamiisha qiimaha sare leh, ee sida dhabta ah u daneeya sheygaaga. Ka soo degso xirmada warbaahinta Lifestreet Media boggooda.
Tags: androidtufaaxaxayaysiinta ciyaartaipadmadal ad mobilexayeesiinta mobilexayaysiinta barnaamijka moobiilka
Shakhsiyan, ma jecli inaan ciyaaro ciyaaro xayeysiin badan leh maxaa yeelay waxay ka gaabiyaan barnaamijyada kale ee laga yaabo inaysan lahayn xayeysiis badan. Macno ayey u leedahay in lagu daro xayaysiis ku saabsan Shimbiraha Xanaaqsan tusaale ahaan maxaa yeelay dad badan oo ka kala socda tirakoobyada kala duwan iyo da'da ayaa arki doona xayeysiiska ciyaar kale ama aaladda makiinada raadinta cusub; si kastaba ha noqotee waxaa laga yaabaa inaysan u shaqeynaynin qof walba. Waan ogahay inaan si shil ah u riixay iyaga oo aan ka xanaaqay inay igu wareejisay goob kale oo ka baxsan ciyaarta. Waa ku tuur buuggayga.
Jun 1, 2012 saacadu markay ahayd 10:33 AM
Waan ku raacsanahay Megan, aniga sidoo kale ma jecli ciyaaraha xayeysiinta maadaama ay gaabis yihiin. Sidoo kale ma jecli carqaladeynta, gaar ahaan markaan dareemo inaan si fiican u shaqeynayo oo aan la duulayo ciyaarteyda. Waxaan la yaabanahay sida ay waxtar u leeyihiin xayeysiintu in kastoo.
Si kastaba ha noqotee, waa hanti maguurto ah oo loogu talagalay xayeysiinta. Lagu daro ciyaaro gaar ah, waxaad la gaari kartaa dhagaystayaal badan ama bartilmaameed dhagaystayaal gaar ah. Waxaan aragnaa xayeysiinta meel walba hadda, ciyaaraha, gaaska gaaska, ATM, iwm.
15, 2014 at 8: 27 AM
Haa tani waa fikrad xayeysiin fiican, laakiin dadka jecel inay la ciyaaraan feejignaan ma noqon karaan sidan oo kale. Sababtoo ah xayeysiinta iyaga oo dhibaya inta ay ciyaarayaan ciyaarta ay jecel yihiin. Inta la ciyaarayo dadka badankood way neceb yihiin xayeysiinta.